Howlgalo dad lagu soo qabqabtey oo ka dhacey Kismaayo – idalenews.com
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Kismaayo ee xarunta Gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in Ciidamada Amisom iyo kuwa DFS howl galo balaaran oo lagu baarayo xaafadaha kala duwan ee Mgaaalada Kismaayo halkaasi ka sameeyeen Maanta.
howlgallo ballaaran ayaa saaka ka bilowday xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, waxaana maanta gabi ahaan hawada ka maqanaa intii uu howl galku socday adeegyadii is-gaarsiinta, taasoo keentay inay xanib-maan xiriirka bulshada.
Ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom oo rac-rac u socda aadna u tira badan ayaa saaka waxa ay halmar howlgallo saf ballaaran ah ka bilaabeen Xaafadaha Farjanno, Faanoole, Siinaay, Calanleey, Shaqaalaha iyo Guulwade.
Howl-galladan oo ah kuwo guri-guri ay ciidamadu u galayaan ayaa waxa ay ka dhaceen gabi ahaan magaalada Kismaayo, waxaana howlgalladani ay saameyn ku yeesheen dhaqdhaqaaqii caadiga ah ee bulshada reer Kismaayo.
Shirkadaha hawada maanta ka maqan waxaa ka mida Shirkadda Isgaarsiinta ee Hormuud, oo saaka shaqaalaha Shirkadda amar lagu siiyay inay adeega jaraan illaa amar danbe.
Howlgalladani intii ay socdeen ayaa lagu qarxiyay 4miino oo nooca dhulka lagu aasaa kuwaasoo ay meesha ku aaseen Xarakada Al-shabaab ee dhawaan lagala wareegay gacan ku haynta Kismaayo sida uu kusoo waramayo Wariyaha Radio Kismaayo ee Magaaladaasi.
Howlgalladan ku salaysan ammaanka ee sida weyn oga biloowday magaaladda ayaa ah kuwo lagu xaqiijinayo xasiloonida ka gadaal kolkii dhawrkii maalmood ee la soo dhaafay magaaladaasi ay ka dhaceen falal lid ku ah ammaanka.
Wafdi labo dhinac isugu jira oo gaarey Degmada Kismaayo oo caasimad u ah Gobalka Jubada Hoose